4 Sano kahor maanta oo kale Guddoomiye Jawaari ayaa la doortay | KEYDMEDIA ONLINE
4 Sano kahor maanta oo kale Guddoomiye Jawaari ayaa la doortay
Guddoomiyihii Golaha Shacabka Baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ayaa afar sano kahor maanta oo kale loo doortay Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa maanta laga joogaa Afar sano maalintii loo doortay guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Mudane Xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo noqday mas’uulkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed oo muddo 8 sano oo xiriir ah hela kalsoonida Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS, mana jiro mas’uul kale oo helay kalsoonidan sida Madaxweyne, Ra’iisul Wasaare iyo Guddoomiye Baarlaman ee hore.
Dowladda haatan joogta ee uu hoggaamiyo Farmaajo waxay codsatay iyadoo ay u harsan tahay muddo Siddeed bilood ah in loo kordhiyo muddo xileedka, waxaana ka dhashay muran xoog leh dalabkaas oo ay ka hor jeedisay golaha shacabka hortiisa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Xaliimo Yareey.
Prof. Jawaari intii aan xilka laga qaadin wuxuu aaminsnaa in aan daah la galin doorashada soo socota, guddiyada ayuuna kula ballamay in ay hadda noo sheegaan haddii aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah, waxa uu ku adkeeyay inuusan ka ogolaan doonin in markii la gaaro Xilliga doorashada aan la aqbali doonin cudur daar iyo mar-marsiyo, hayeeshee Famaajo ayaa go’aansaday inuu meesha ka wareejiyo Prof. Jawaari islamarkaana ku qasbay in uu is casilo.
Saan-saan lagu soo dooranayo xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS ma muuqato, doorashadii la filayay in ay dhacdana weli muran ayaa ka jira, waxaana muuqata wax u eg doorasho-ku-sheegii KGS, Galmudug iyo Hirshabeelle ka qabsoontay labadii sano ee lasoo dhaafay, taasoo la doonayo in lagu sii hoggaamiyo Afarta sano ee soo socota.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa horay u ansixiyay in ay sii shaqeyn doonaan inta laga soo dhisayo baarlamankii baddali lahaa xildhibaanada maanta jooga, taasi waxay ka dhigan tahay in muddo sanad ah xitaa haddii ay qaadato dhismaha baarlamanka ay sii shaqeyn doonaan xildhibaanada uu hormuudka u yahay Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Mursalkii lagu baddalay Rug caddaagii weynaa ee Golaha Shacabka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.